Waxa Ay Dani Badday In Uu Kala Doorto Badbaadada Nolosha Hooyadii, Iyo Xaaskiisa Oo Laba Carruur Wadata - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Waxa Ay Dani Badday In Uu Kala Doorto Badbaadada Nolosha Hooyadii, Iyo...
Dadad waaweyn oo dhowaan ku soo rogmaday degmada Hebei ee dalka Shiinaha, ayaa nin degaanka ah ku kallifay in uu kala doorto laba go’aan oo aad u adag, kuwaas oo ahaa in dantu ay ku qasabtay in uu kala doorto badbaadinta hooyadii iyo xaaskiisa.
Warkan oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay Alcarabiya ayaa lagu sheegay in ninkan oo lagu magacaabo Gao Vingshaw uu qaatay go’aan adag oo ahaa in uu xaaskiisa iyo laba carruur ah oo uu dhalay kaga tago saqafka guri yar oo ay deggenaayeen oo ay ku go’doonsanaayeen khatarna ugu jireen in uu guri la dumo oo iyagana daadadku la tagaan, kadibna uu u orday dhinaca guri isla deegaanka ahaa oo ay hooyadii deggenayd, si uu u badbaadiyo.
Ninkan oo nasiibwanaaggiisa ku guulaystay in uu badbaadiyo hooyadii ayaa la sheegay in intii uu badbaadada hooyadii ku gudo jiray ay daadadku aad u sii bateen, sidaa awgeedna ay ku adkaatay in uu dib ugu noqday guriga uu saqafkiisa sare kaga tegey xaaskiisa iyo labadiisa carruur ahaa.
Saacado kadib oo ay daadadkii ka yaraadeen ayaa uu dib ugu soo noqday gurigii xaaskiisa, nasiib wanaagna waxa uu helay iyaga oo weli saqafkii sare ee guriga saaran oo daadkii ka badbaaday.
Ninkan ayaa ay xaaskiisu aad uga cadhootay go’aanka uu iyada iyo labadeeda carruur ah kaga tegey ee hooyadii uu u orday, markii uu ka soo dejiyey saqafkana waxa ay si dhaqso ah uga dalbatay in uu furo, cadho ayaanay ugu dudday gurigii labadeeda waalid. Laakiin muddo uu sabaalo waday, una sharraxayey sababta uu hooyadii u doortay kadib gabadhani waxa ay dooratay in ay dib ugu soo noqoto gurigeeda iyo saygeedan.
Waxaa xusid mudan in daadadka ka dhacay degmada Hebei ay khasaare aad u ballaadhan oo naf iyo hantiba ah ay geysteen iyada oo ay ku dhinteen 130 ruux halka 110 ruux oo kalana la waayey geeri iyo nololba meel uu daadku ku tuuray.
Somaliland: WADDANI Drought Appeal
Wargeys Xog Ka Helay Dhalinyaro Reer Somaliland Ah Oo Ka Mid Ahaa Ciidankii Ay Soomaaliya Tababarka Ugu Dirtay Erateriya